Certificate in Business Management Foundation
IQN Single Subject UK Diplomas
5 May တွင် အတန်းသစ်စမည်။
သင်တန်းကြေး - 250,000 ks (3 installments) သာပေးသွင်းရုံဖြင့် International Qualification Network (IQN) မှ ပေးအပ်သော SCQF Level7အဆင့်ရှိသော UK Diploma တစ်ခုကိုရရှိနိုင်မည်။
Professional Diploma တစ်ခုဖြစ်သော Diploma in HRM သည် HRM နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းသဘာဝကို ဦးစားပေးသင်ကြားသောသင်တန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်မည့်သူများ နှင့် လက်ရှိ ဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်နေကြသူများ အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
- တစ်ဦးချင်းတာဝန်ယူရသော HR နှင့်သက်ဆိုင်သော ပြသနာများ နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာများ တွင် ဖြေရှင်းရသောလုပ်ငန်းခွင်မှ ဝန်ထမ်းများ
- HRM ဖြင့်သက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ
- HRM ကို စနစ်တကျအခြေခံမှစ၍လေ့လာသင်ယူလိုသော သူများ အတွက်
ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများကို စနစ်တကျမြှင့်တင်လိုသော လုပ်ငန်းရှင်များမှ လည်း မိမိဝန်ထမ်းများကို ယခုဖွင့်လှစ်မည့် HR Professional Diploma သင်တန်းတက် ရောက်စေခြင်းဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းအတွက်ပိုမိုသိသာကောင်းမွန်သော အကျိုးရလဒ်များကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရိုးညွှန်းတန်းများကိုထိရောက်စွာဂရုစိုက်သင်ကြားပေးသည့်အပြင် စာမေးပွဲမေးခွန်းများအတိုင်း မေးခွန်းဟောင်းနမူနာများကို သေချာလေ့ကျ င့်သင်ကြားပေးပါသည်။
ထိရောက်သော သင်ကြားမှုဖြစ်စေရန် သင်တန်းသားဦးရေကန့်သတ် ထားပါသည်။
Tuition Fee – 250,000 ks ONLY (3 installments)
ကုမ္ပဏီ များအတွက် အထူးအစီအစဉ်...
၄ ယောက်တက်လျှင်၅ ယောက်မြောက်သင်တန်းသား FREE ...
ကုမ္ပဏီများအတွက် Management Training များကိုစီစဉ်ပေးပါ သည်။
သင်ကြားပေးမည့်ဆရာမ - ဒေါ်အိမ့်သက်မှူး ခိုင် (Master of Business Administration, YUE)
သင်တန်းချိန် : EVERY SUNDAY (9 am -–12 pm)
သင်တန်းကာလ : ၄ လ
သင်တန်းစမည့်ရက်း5 May, 2019
Exam Fees : 85 GBP + 30000 ks
Diploma in HRM သည် International Qualification Network (IQN) မှ ပေးအပ်သော SCQF Level7အဆင့်ရှိသော Diploma ဖြစ်သည်။
1.The Practice of HRM
3.Factors Affecting Employee Behavior
4.Learning and Development
5.Human Resource Planning
8.Monitoring and Managing Performance
သင်တန်းနေရာ - TDC Training & Development Center
အမှတ် ၂၉ တတိယထပ် / လှည်းတန်းလမ်း (အောက်လမ်း) / လမ်းမတော်မြို့နယ်
# ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၉ ၄၄၄ ၇၇၇ ၉၀၂ ၊ ၀၁ ၂၃၁၅၀၀၄
TDC Training & Development Center သည် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် တစ်ဦးချင်း စီ လိုအပ်နေသောလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု အတွေ့အကြုံများကို မြင့်မားတိုးတက်အောင် အ ကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနေသော EVER UP COLLEGE ၏ Training & Development Center သင်တန်းကျောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အရယူသင့်သော သီတင်းကျွတ်အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ် …..
Diploma in Marketing (IQN-UK)
လုပ်ငန်းခွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမြှင့်တင်ဖို့ လုပ်ငန်းခွင်အသုံးချ Professional Diploma များကို စနစ်တကျ ပူးပေါင်းသင်ယူခြင်းဖြင့် ရယူလိုက်ပါ။
ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများကို စနစ်တကျမြှင့်တင်လိုသော လုပ်ငန်းရှင်များမှ လည်း မိမိဝန်ထမ်းများကို ယခုဖွင့်လှစ်မည့် Professional Diploma သင်တန်းများတက် ရောက်စေခြင်းဖြင့် မိမိလုပ်ငန်းအတွက်ပိုမိုသိသာကောင်းမွန်သော အကျိုးရလဒ်များကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး -ယခင် 450,000 ks, ယခု 200,000 ks (2 installments)
၄+၁ အစီအစဉ်အနေဖြင့် ၄ ယောက်တက်လျှင်၅ ယောက်မြောက်သင်တန်းသား FREE
သင်ကြားမည့်ဆရာ : ဦးညီညီမောင် (MD cum President of EVER UP College)
သင်တန်းချိန် : EVERY SATURDAY (3:30 pm- 6pm)
သင်တန်းစမည့်ရက်3းrd November, 2018
1.Markets and Marketing
2.The Marketing Process: Strategy and Planning
6.Market Segmentation and Targeting
International Qualification Network (IQN) မှ ပေးအပ်သော SCQF Level7အဆင့်ရှိသော Diploma ဖြစ်သည်။
• Marketing and Sales management အပိုင်းတွင် တစ်ဦးချင်းတာဝန်ယူရသူများ
• Marketing management နယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ
• Sales and Marketing management ပညာရပ်ကို စနစ်တကျအခြေခံမှစ၍လေ့လာသင်ယူလိုသော သူများ အတွက်
ကုမ္ပဏီများအတွက် Management Training များကိုစီစဉ်ပေးပါသည်။
အသေးစိတ်စုံစမ်းရန်… EVER UP College
PH: 09 444777901 ~ 903
EVER UP College: No.29, Hledan Street, Lower block, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar
Diploma in Human Resource Management (IQN-UK)
သင်တန်းချိန် : EVERY SUNDAY (2:30 pm –5pm)
သင်တန်းစမည့်ရက်း4th November, 2018
• တစ်ဦးချင်းတာဝန်ယူရသော HR နှင့်သက်ဆိုင်သော ပြသနာများ နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာများ တွင် ဖြေရှင်းရသောလုပ်ငန်းခွင်မှ ဝန်ထမ်းများ
• HRM ဖြင့်သက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလိုသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ
• HRM ကို စနစ်တကျအခြေခံမှစ၍လေ့လာသင်ယူလိုသော သူများ အတွက်
ABE UK Diplomas
MBA (Malaysia University of Science and Technology)
No.29, Hledan Street, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar
Hotline : 09 444 777 901 ~ 903
Copyright © 2022 Ever UP College. All Rights Reserved. Developed by DMYANMAR